ဝဿနျဦး : အဝေးရောက်ဆုတောင်း
ရေးသူ ၀ဿနျဦး ဒီအချိန်မှာ 2:58 AM
My Mom is left alone in Burma. I was so worrying for her. I still haveatear in my eyes because I can't reach her yet! Thanks for your poems, it's touched.
အဝေးရောက်သားမောင် ဆုတောင်းတွေ အခါခါ ချွေနေမိတယ် ၊ အမေ့အိမ်နဲ့ အဆက်အသွယ် မရသေးဘူးဗျ ....
အားလုံးထပ်တူထပ်မျှ ခံစားနေကြရပါတယ် မောင်လေးရေ...
ုမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးအတွက် ဆုတောင်းပေးနေပါတယ် ကဗျာလေးနှင့်အတူပေါ့
အဝေးရောက်နေတဲ့ မိဖမောင်ဖွားတွေကို စိုးရိမ်စိတ်တွေ ၀င်နေတာက အခုထိကို စိုးရိမ်နေရတုန်း... ဆက်သွယ်လို့ကို မရသေးဘူး... မောင်လေးလဲ မိဖတွေနဲ့ အမြန်ဆုံးအဆက်အသွယ် ရပါစေ...
အမေ ကဗျာတွေ ခုမှပဲဖတ်ရတော့တယ် သယ်ရင်းရာ။
အဝေးရောက်နေသူအားလုံးရဲ့ ဆန္ဒနဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျတယ် သယ်ရင်းရာ။ မြန်မာပြည်သူ/ပြည်သား အားလုံး ဘေးရန်ကင်းဝေး အေးချမ်းကြပါစေ။ ။
ကဗျာလေးဖတ်ပြီး ၀မ်းနည်းရပါတယ်။ အတူတူ ဆုတောင်းနေပါတယ်။